Global Voices teny Malagasy » Habibiana Tsotra Izao No Azo Ilazana ny Tantaran’ny Fihazàn’ny Mpanjaka Tao Amin’ireo Lemaka Atsimon’i Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Janoary 2016 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Mediam-bahoaka, Saripika, Tantara, Tontolo_iainana
Ireo “rhinoceros” miaraka amin'ny diera voahidy anaty vala ery aoriany. Angamba ampahana fanomezana avy tamin'ireo biby teratany nangonina tao Nepal izay natolotry ny Maharaja ny mpanjaka George V. Sary avy amin'ny Tahirin'ny Tranomboky Dizitalin'ny Anjerimanontolom-Pirenena Aostraliana. Sehatra ho an'ny daholobe.
Tsy malaza noho ireo lemaka mamokatra ao aminy fotsiny ny avaratr'i Nepal, fa koa noho ireo ala mikitroka sy ny hamaroan'ireo bibidia.
Navadika ho valan-javaboahary ankehitriny, tany lonaka natao ho fihazana ilay faritra tany aloha tany. Nampiasain’ireo mpitondra Nepali Rana  sy ireo vahininy ho toy ny toerana fihazan'ny mpanjaka sy ireo vahiny nandritra ny taona 1846 hatramin'ny 1951 ny Chitwan National Park  ankehitriny .
Lasa miparitaka be ety anaty aterineto ireo vondron-tsary ara-tantara mampiseho ireo sary mahatezitra  ahitàna ireo mpitondra Britanika sy Nepale manao fihazàna mandatsa-drà amin'ireo biby marobe, ka anisan'izany ireo tigra, bera ary ireo “rhinoceros”.
Nanomboka tamin'ny Febroary 1876 AD no nihaza ny Mpanjaka Britanika ary nampiantranoin'i Jung Bahadur Rana, praiminisitra tamin'izany fotoana izany, hoy i Subodh Rana manoratra ao amin'ny bilaoginy :
Ny volana Febroary 1876 A.D, tonga mba hihaza tao Banbassa, andrefan'i Nepal, i Albert Edward  Printsin'i Wales (Mpanjaka Edward VII taty aoriana), zanaka lahin'ny Mpanjakavavy Victoria, nampiantranoin'ny Praiminisitra Jung Bahadur Rana, ary tamin'izany dia nahatifitra tigra 23 nandritra ny tapa-bolana. Efa niahy an'i Delhi Durbar izy nandritra ny fankalazana ny fanosorana ho mpanjaka Victoria reniny ho Amperoran'i India ny 1 Janoary 1876 A.D. Voasoratra fa tena nahasorena ireo fombafombam-panjakana hoe ny fahatongavany hitifitifitra tany Terai no zava-nisondagina tamin'ny dia nataony tany India.
Taty aoriana, nanaraka ny fombandrazana nanasàn'ny praiminisitra Rana azy, ireo Mpanjaka Britanika. Na ny printsy Franz Ferdinand aza, izay nitarika ny fipoahan'ny Ady Lehibe I tamin'ny taona 1914 ny famonoana azy, tonga hihaza tao Nepal rehefa nasain'ny Maharajah Bir Shumsher ny volana martsa 1893.
Na izany aza, ny tena fandehanana nihaza niharo habibiana sy nahatsiravina indrindra dia izay nataon'ny Mpanjaka George V  nivahiny tao Nepal taorian'ny nisalorany ny maha-Amperoran'i India azy ny taona 1911.
Nahafaty “rhinoceros” 18, tigra 39 ary bera lava volo 4 tamin'ny fitifirana ilay andiana mpihaza tamin'ny 18-28 Desambra 1911, rehefa nahazo ny fanasàn'ny Praiminisitra Chandra Shamsher Rana.
Ny mpanjaka izy tenany nitifitra “rhinoceros” valo, tigra 21 ary bera iray.
Ny fihazàn'ny mpanjaka ny Tigra sy ireo “Rhinoceros” tao amin'ny Terai Nepaley ny taona 1911  izay nataon'i Kees Rookmaaker, Barbara Nelson ary Darrel Dorrington no manome antsipirihany momba ilay fihazàna mampihoron-koditra.
Ny Praiminisitr'i Nepal, Chandra Shamsher niarahaba ny Mpanjaka George V nandritra ny andiana fihazàna tao Nepal Terai tamin'ny taona 1911
Ny Mpanjaka George V miaraka amin'izay matiny ny andron'ny Desambra 1911. Tigra mitontaly 39, “rhinoceros” 18 & bera 4 no maty. #Nepal 
1911 – Edward Henry, Inspektera Jeneraly taloha tao amin'ny mpitandro filaminana tao Bengal, nandritra ny fihazàna fanaon'ny mpanjaka niarahana tamin'ny Mpanjaka George V tao Narayani, Nepal
Voarakitra ao anatin'ireo sary 50 isa avy amin'ny boky firaiketan-tsary natolotry ny Anjerimanontolom-pirenen'i Aostralia ny fihazàna fanaon'ny mpanjaka. Ny trano tranomboky ANU no nanolotra ny maribolana tamin'ireo sary .
Ny lahatsoratra Ny Tifitry ny Mpanjaka Imperialy tao Terai Nepal, ny Desambra 1911  mamaritra ilay fihazàna amin'ny hoe :
[…] Niisa teo amin'ny 14.000 teo ho eo , ary nahitàna mpibaiko elefanta 2.000 ireo manodidina ny Maharaja, izay ao anaty toby mitokana lavidavitry ny faritra ambonin'ilay renirano. Taorian'ny Fotoam-pivavahana ny alahady 24 Desambra 1911, nasehon'ny Maharaja ny Mpanjaka ny angona iray misy karazam-biby maherin'ny fitopolo izay mampalaza an'i Nepal manokana. Nandritra ny fihazàna izay nanaraka taorian'ilay fotoam-pivavahana ny 25 Desambra, nanakaiky ny 600 ireo elefanta nanakombona ny endrika “peratra”. Ny mpanjaka no nitifitra izay tigra ngeza indrindra nalefa tamin'io andro io . […]
Ireo ambany ireo ny sary nofantenana avy amin'ilay fihazana fanaon'ny mpanjaka.
Fotoam-pihazàna itaingenana ireo elefanta mita ny renirano. Sary natolotry ny
Tahirin'ny Tranomboky Dizitalin'ny Anjerimanontolom-Pirenena Aostraliana. Sehatra ho an'ny daholobe.
Tigra iray miampita ny rano. Sary:
Mahouts (ireo elefanta mpisava lalana) sy shikaris (ireo mpihaza) eo ambonin'ireo elefanta manao endrika “peratra”. Sary:
Tahirin'ny Tranomboky Dizitalin'ny Anjerimanontolom-Pirenena Aostraliana. Sehatra ho an'ny daholobe..
Ny elefanta sy ny mahout miaraka amin'ny tigra. Sary:
Tahirin'ny Tranomboky Dizitalin'ny Anjerimanontolom-Pirenena Aostraliana. Sehatra ho an'ny daholobe
Fotoam-pihazàna miaraka amin'ny Mpanjaka George V sy ny Maharaja an'i Nepal. Sary:
Ireo mpihaza misafo:manisa ireo tigra efatra maty sy bera iray. Sary: natolotry ny
George V mandray naoty ny isan'ireo tigra efatra sy bera iray maty. Sary:
Tigra maty eo ambaben'ny elefanta iray. Sary natolotry ny
Ireo mpihaza miaraka amin'ireo “rhinoceros” maty. Sary natolotry ny
Andian'olona mijery ny fanendahana ny hoditra sy fitetehana ny “rhinoceros” iray maty. Sary natolotry ny Tahirin'ny Tranomboky Dizitalin'ny Anjerimanontolom-Pirenena Aostraliana. Sehatra ho an'ny daholobe
Sarin'olona maromaro avy amin'ilay tarika mpihaza teo anoloan'ny tranohevan'i George V. Ny Mpanjaka George V miaraka amin'i Chandra Shamsher Janga Bahadur Rana. Praiminisitra sady Maharaja an'i Nepal, mitsangana eo afovoany. Sary avy amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Hafa ankoatra ireo sary ireo, misy koa misy fahatsiarovana mivoitra nandritra izany vanim-potoana izany. Shankarshan Thakur, tonian-dahatsoratry ny The Telegraph, monina ao Delhi, nibitsika hoe :
Lasa teoram-pilalaovana haolo ankehitriny ilay toerana fihazàna namboarina ho an'ny Mpanjaka George V tao Bhikhnathori, tao amin'ny sisintany manasaraka an'i India sy Nepal
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/21/77686/
 ireo mpitondra Nepali Rana: https://en.wikipedia.org/wiki/Rana_dynasty
 sary mahatezitra: http://www.express.co.uk/news/history/614921/King-George-V-hunting-trip-Nepal-slaughtered-tigers-and-rhinos
 bilaoginy : http://historylessonsnepal.blogspot.com/2009/03/remembering-royal-hunts.html?view=mosaic
 George V: https://en.wikipedia.org/wiki/George_V
 Ny fihazàn'ny mpanjaka ny Tigra sy ireo “Rhinoceros” tao amin'ny Terai Nepaley ny taona 1911: http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175857652.pdf
 no nanolotra ny maribolana tamin'ireo sary: https://anulib.anu.edu.au/using-the-library/collections/asia-pacific-digital-collections/his-imperial-majestys-shoot-in-nepalese-terai/